Cabify 7.6.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.6.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Cabify
Cabify ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Discover Cabify, သင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူတစ်ဦးမောင်းသူနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကကားများနှင့်အတူမြို့ပတ်ပတ်လည် get ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး app ကို။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်သင်တစ်ဦးမောင်းသူဒါမှမဟုတ်သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာသင်ကယူစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့တက္ကစီနှင့်အတူကားတစ်စီးရှိပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို Cabify အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
သင့်ရဲ့ခရီး 1. အမိန့်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ယူထား။ app ကိုဖွင့်ပါနှင့်သင်နှင့်သင်သွားချင်ဘယ်မှာဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားထဲမှာသွားလာရန်သင့်လို Choose; Lite ကို, အလုပ်အမှုဆောင်, လြယ္ကူတက္ကစီ ... သင့်ရဲ့မြို့အတွက်ရရှိနိုင်သမျှသောရှေးခယျြစရာရှာဖွေတွေ့ရှိ!
2. သင့်ရဲ့ခရီးနှင့် ... တစ်ဦးကားမောင်းသူရဲ့သူတို့၏လမ်းအပေါ်အတည်ပြုပါ! အကြှနျုပျတို့သညျမှတျပုံတငျပန်းကန်အပါအဝင်သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းနှင့်သင့်မော်တော်ယာဉ်အသေးစိတျ၏အမည်ကိုပြောပြနှင့်မည်သို့ဝေးကပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျခရီးမရောက်မီ 3. ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းကိုသိပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့တက္ကစီ၌အကြှနျုပျတို့၏ကို virtual taximeter ကျေးဇူးတင်စီးလျှင်ပင်, သင်စီးနင်းများအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်စတင်ချိန် မှစ. သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သငျသညျအမြားဆုံးသငျသညျကိုက်ညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း (ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ငွေသား, PayPal က ... ) ရွေးနိုင်သည်။
4. အတွေ့အကြုံမျှဝေပါ။ သငျသညျအသီးအသီးအခိုက်၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာသူတို့သိဒါသငျသညျဘေးကင်းခံစားရတယ်ဒါကြောင့်သင်ကမိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကသင်၏ခရီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်သည်သင်၏စီးနင်း personalize နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Cabify app ထဲမှာ, သင်ကားမောင်းသူသင်တို့အဘို့တံခါးကိုဖွင့်ချင်နဲ့သင်လေအေးပေးစက်အပေါ်လိုပါကဖြစ်စေ, သင့်ရဲ့ကြိုက်တတ်တဲ့အဘယျသို့ဂီတကိုရွေးပါ။ အားလုံးဒါကြောင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအရှိဆုံးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်မြို့ပတ်လည်မှာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်မှာရှိ Cabify ရရှိနိုင်ပါသနည်း
Cabify 90 ကျော်မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အာဂျင်တီးနား, ဘရာဇီး, ချီလီ, ကိုလံဘီယာ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, အီကွေဒေါ, မက္ကဆီကို, ပနားမား, ပီရူး, ပေါ်တူဂီ, စပိန်နှင့်ဥရုဂွေး: သင်အောက်ပါနိုင်ငံများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားများသို့မဟုတ်တက္ကစီထဲမှာလှည့်ပတ်ရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ cabify.com မှာ operate ရှိရာမြို့ကြီးများ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းကိုကြည့်ပါ
ဘယ်အရာကိုအားသာချက်များကတော့ Cabify app ကိုသငျသညျပေးသလဲ
🚘Yourဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးခရီး geolocalized နှင့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူချက်ချင်း shared နိုင်ပါသည်။ ထိုအသင်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်၏အသေးစိတျ, ယာဉ်မောင်းနှင့်သင့်ရွေးတက်ပွိုင့်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။
🚘We'veလွယ်ကူတက္ကစီကဆက်ပြောသည်။ အခုတော့တဦးတည်း app ထဲမှာသင်ပိုမို options များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်စီးချင်သောအရာကိုမျိုးကားသို့မဟုတ်တက္ကစီဆုံးဖြတ်။
ကြားနေခရီး🚘Carbon။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီး generate သမျှသော CO2 ကိုထေမိ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်သိန်းကျင်ကပိုရယူပါ!
ဈေးကွက်ထဲမှာ🚘Theအကောင်းဆုံးဒရိုင်ဘာ။ Cabify ၌အကြှနျုပျတို့၏ platform ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကိုလက်မခံဖို့သတ်မှတ်ချက်န်းကျင်ကိုအများဆုံးရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်ယာဉ်မောင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်နှင့်အပေါ်-ဘော်ဒါသွားပါ။
သငျသညျခရီးမတိုင်မီစျေးနှုန်း🚘Know။ သင်တစ်ဦးစီးနင်းအမိန့်မတိုင်မီကျနော်တို့ကအမြဲသင်စျေးနှုန်းကိုပြ။ ဒီနည်းလမ်းကသင်ပေးဆောင်တာပေါ့ဘယ်လောက် သိ. စိတ်အေးလက်အေးသွားလာနိုင်ပါတယ်။
🚘 100% personalization ။ သင်တစ်ဝှမ်းရချင်သလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်။ အကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုက်ညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုနှငျ့သငျကွားရချင်ပါတယ်ဂီတ၏ပင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။
🚘Withရုံတစျခုအကောင့်, 90 ကျော်မြို့ကြီးများ။ သငျသညျ Cabify နှင့်အတူသွားလာလိုလျှင်သင်အသစ်များကိုအကောင့်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲထက်ပိုတစ်ဆယ်နိုင်ငံများတွင်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင် Cabify အတူကားမောင်းသူဖြစ်ချင်ပါသလား
အဘယ်အရာကိုတကယ်သင်လှုံ့ဆျောအခြားသူများမြို့ရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးနေသည်ဆိုပါ Cabify အသုံးပြုယာဉ်မောင်းများ၏ Fleet များထဲမှ join ။ သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်သင်အကောင်းဆုံးကိုပုံမှန်အတိုင်းကမ်းလှမ်းကြောင်း app တစ်ခုနှင့်အတူသင့်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီကားမောင်းငွေရှာဖို့စတင်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့် cabify.com/drivers အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Cabify ယာဉ်မောင်း app ကို download လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့န်ထမ်းကိုအကောင်းဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး app ကိုငှေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာကားများနှင့်တက္ကစီ၏ကြီးမားသောရေတပ်, ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းသငျသညျကိုဖန်ဆင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်ခရီးပိုမိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ cabify.com/business မှာပိုပြီးထွက်ရှာပါ။
Cabify အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cabify အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cabify အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cabify အား အခ်က္ျပပါ
psantos စတိုး 6.12k 1.67M
Cabify ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cabify အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.6.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://cabify.com/es/privacy_policy
လက်မှတ် SHA1: 07:4D:16:28:00:2D:1A:61:F2:58:D2:C6:4E:11:8B:F3:16:18:EE:8F
အဖွဲ့အစည်း (O): Cabify
Cabify APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ